Lagani Sutra | Nepal's Share Market News Site
ACLBSL ADBL ADBLD83 AHPC AIL AKBSL AKJCL AKPL ALBSL ALICL API AVU BARUN BBC BFC BNL BNT BOKL BPCL BSL BSM CBBL CBL CCBL CFCL CFL CGH CHCL CHL CIT CLBSL CMB CMF1 CMF2 CORBL CZBIL DDBL DHPL EBL EBLCP EDBL EIC FHL FMDBL FOWAD GBBL GBD80/81 GBIME GBLBS GFCL GGBSL GHL GIC GILB GIMES1 GLBSL GLH GLICL GMFBS GMFIL GRDBL GRU GUFL HBL HBLD83 HBT HDHPC HDL HFL HGI HIDCL HPPL HURJA ICFC ICFCD83 IGI ILBS JBBL JFL JLI JOSHI JSLBB JSM KBL KBLD86 KEF KKHC KLBSL KMCDB KPCL KRBL KSBBL LBBL LBL LBLD86 LEC LEMF LFC LGIL LICN LLBS LUK MBL MDB MEGA MEN MERO MFIL MHNL MLBBL MLBL MLBSL MMFDB MNBBL MPFL MSLB MSMBS NABBC NABIL NADEP NAGRO NBB NBBD2085 NBBU NBF2 NBL NCCB NEF NFD NFS NGPL NHDL NHPC NIB NIBLPF NIBSF1 NICA NICBF NICGF NICL NICLBSL NIFRA NIL NKU NLBBL NLG NLIC NLICL NLO NMB NMB50 NMBHF1 NMBMF NMFBS NRIC NRN NSEWA NSM NTC NTL NUBL NVG NWC OHL PBLD84 PBLD86 PCBL PFL PIC PICL PLI PLIC PMHPL PPCL PRIN PROFL PRVU RADHI RBCL RHPC RHPL RJM RLFL RLI RMDC RRHP RSDC RURU SABSL SADBL SAEF SANIMA SAPDBL SBI SBL SBPP SCB SDLBSL SEF SEOS SFC SFCL SFFIL SFMF SGI SHBL SHEL SHINE SHIVM SHL SHPC SIC SICL SIFC SIGS2 SIL SINDU SJCL SKBBL SLBBL SLBS SLBSL SLCF SLICL SMATA SMB SMFBS SMFDB SNLB SPARS SPDL SRBL SRS SSHL STC SWBBL TMDBL TRH UFL UIC UMHL UMRH UNHPL UNL UPCL UPPER USLB VLBS WOMI YHL
Hourly Market Watch
CEO's Past History
Best Performer Company
Nepse Index Analysis
Sector Wise Analysis
ऋण लिएर आईओसीलाई नेपाल आयल निगमद्वारा १३ अर्ब रकम भुक्तानी
माघ १०, सोमबार
सञ्चित बचत शून्यमा पुगेपछि नेपाल आयल निगमले सरकारसँग ऋण लिएर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई १३ अर्ब २० करोड रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए अनुसार निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट एक अर्ब ८० करोड रुपैँया लिएर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्तावापतको रकम आईओसीलाई भुक्तानी गरेको हो ।
आईओसीलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैँया भुक्तानी गर्न नपुगेपछि सो रकम उपलब्ध गराइदिन निगमले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
शुक्रबार बसेको मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको बैठकले अपुग भएको रकम निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि निगमले घाटा बेहोर्नु परेको बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढाएर मूल्य समायोजन नगर्दा थप घाटा हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । यसैबीच आईओसीलाई तेस्रो किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा एनओसी चिन्तामा रहेको छ ।
जेफ बेजोसले १६ वर्ष पुरानो फ्रेम गरिएको पत्रिकालाई ‘रिमाइन्डर‘को रूपमा किन राख्छन् ?
प्रिन्सिपलबाट विद्यालयमै बलात्कृत
आर्थिक पाठहरू जो तपाईंले आफ्नो आमाबाट सिक्न सक्नुहुन्छ
तपाईले कति लामो समयसम्म स्टक होल्ड गरेर राख्नु पर्छ ?
स्टक मूल्यहरूलाई असर गर्ने कारकहरू के-के हुन् ?
स्टक मूल्यहरू कसरी निर्धारण गरिन्छ ?
दीर्घकालीन लगानीका लागि केहि सुझावहरू
जवरजस्ती करणी सम्बन्धि मुद्दाको हदम्यादका सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा के छ ?
विश्व शेयर बजारको इतिहास र केहि रमाइला तथ्यहरु
यूरो डलरसँग समानताको नजिक छ; लगानीकर्ताहरूको लागि यसको अर्थ के हुन सक्छ ?
राकेश झुनझुनवालाका सेयर लगानी टिप्स हरु
के हो वारेन बफेट सूचक ? कसरी लगानी ब्यबस्थापन गर्ने ?
रोचक तथा रमाइला शेयर बजार तथ्याङ्कहरु
के हो प्राबिधिक विश्लेसनमा प्रयोग हुने क्यान्डलस्टिक चार्ट ?
४,००० करोड रुपैयाँको घोटला गर्ने हर्षद मेहताको रमाइला तथ्यहरु
लगानी गर्दा यी केहि साधारण गल्तीहरू गर्नबाट बच्नुहोस्
गोल्डेन बुट: मोहम्मद सालाह र सन ह्युङ-मिन प्रिमियर लिगको शीर्ष स्कोरर बने
म्यानचेस्टर सिटिले हात पार्यो इङ्गलिस प्रिमियर लिग, लिभरपूल दोस्रो स्थानमा
खाद्य निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको देशहरूको सूची
इन्धनको भाउ फेरी १० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको भाउ कति ?
समाचार प्रकासन र विज्ञापनको लागि
सुविधानगर, तिनकुने काठमाडौँ